Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅
ဟိုတ​လောကပဲ i’ll ride with you ဆိုပြီး ဖတ်​လိုက်​ရ​တော့ ၂ ဖက်​မျှ​တွေးလိုက်​မိ​သေးတယ်​
They add that the group will track down and close all accounts on social networks related to terrorists in order to avenge those who have been killed.
.တစ်ခုခုပေးမယ်ဆိုရင်တောင်.. လှမ်းယူနိုင်မယ့် အင်အားလေး.. အရင်ပေးပါ…
Pooch ပြောလိုက်တဲ့ နှစ်ဖက်မျှ တွေး လိုက်မိသေး ဆိုတဲ့ စကားလေး ကို ဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေး ကို ရေးချင်လို့ ပြန်ဝင်လာပါတယ်။
satire အရေးအခံရဆုံးက.. နိုင်ငံရေး.. လိင်ကိစ္စနဲံ.. ဘာသာရေးတဲ့..။
မနက်က အချိန်မရလိုက်လို့ ဒီ စာသား ကို မဆွေးနွေး ရသေးဘူး။
Post by ချစ်ခွန်း ချိုချို.
သူကြီး အဲဒီ ဗီဒီယို က Facebook ပေါ်မှာ မရှိတော့ဘူး ထင်တယ်။
“အခုဆိုလို့ရှိရင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ခြင်း ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတယ်ပေါ့လေ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကျဆင်းအောင်လုပ်မယ်။ ပပျောက်အောင်လုပ်မယ်။ အဲဒါဟာ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ တချို့ကတော့ ဒါအစိုးရက လုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စလို့ ဒီလိုပဲထင်ကြပါတယ်။ အစိုးရက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အစိုးရက လုပ်ထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်ရမှာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတာက ပြည်သူလူထုကသာလျှင် မိမိတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ပပျောက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့အားလုံး သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဘယ်လိုပပျောက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မတို့ဟာ ဥာဏ်ပညာ လိုပါတယ်။ ပညာရှိမှကျွန်မတို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ ပညာအဆင့်မြင့်မှ ဒီနိုင်ငံဟာ အဆင့်မြင့်နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ ပညာမရှိဘဲနဲ့ ကျွန်မတို့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပျောက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ ပြည်သူတွေကို စဉ်းစားပိုင်ခွင့်မပေးဘူး။ ပြည်သူတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးတောပိုင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာဟာ ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အတွေးအခေါ် အဆင့်မြင့်မှ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ အဆင့်မြင့်နိုင်မှာပါ”
From Mark Zuckerberg Facebook Wall :
တော်လိုက်တဲ့ တို့ သူကြီးမင်း။ lol:-))))) :))
But men ….. Where is the border line between those two sides ?
No worry I haveasloution now. :))
That’s wise. :))
သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့် ဦးမြတ်ခိုင် အင်တာဗျူး
– ဆိုဒေါ့ အာ့ကို ဘိုမြင်ကျဒုံး
ယူအက်စ်အခြေခံဥပဒေအရ.. ယူအက်စ်သမ္မတက.. သက်တမ်း၂ခု.. ၈နှစ်ထက်ပို၍ အရွေးခံမရ..။
သီတဂူ ဆရာတော် ပြောတဲ့ ရှေ့တိုင်းမှူးလုပ်သွားတာ နောက်တိုင်းမှူးဆက်မလုပ်လို့ ဆုံးရှုံးပါတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့် အဲလိုစီမံရသလဲ သမိုင်းဂျောင်းနဲ့ လွဲနေတယ်။ တိုင်းမှူးဓေ၈ါင် သုံးနှစ်ဆိုတာ ဂျိုကုတ်မှူးဂျီးသမ်းရွှေလက်ထက်မှာ ပြောင်းလိုက်တာ။ အယင်တိုင်းမှူးတွေ ဖင်ဂျွတ်တက်အောင် ထိုင်နေပြီး စားကြဝါးကြ စားမာန်ခုတ်ကြမို့ ထိန်းသိမ်းလို့ရအောင် ၃နှစ်ပေးစားပြီး ပြောင်းပစ်တာ..။ သီတဂူ ဆရာတော်က ဇစ်မြစ်မသိဘဲ ရမ်းကြိတ်နေတာ။ အဲလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုညှိကွပ်မည်လဲ သူလည်း သိပုံမရ။ ပြောတာတော့ လူတိုင်းပြောတတ်တာပေါ့။ သူ့အင်တာဗျူးခန်း ဖတ်လိုက်ရင် လက်ရှိအခြေအနေလေးကို လက်မလွှတ်ချင်ဘူး။ နေရာရ ရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေနဲ့ နေရာလက်မဲ့ ပြင်ဆင်ရေးဝါဒီ ထိပ်တိုက်တွေ့ရမည့် အစဉ်အလာ ပုံစံခွက်ပါပဲ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒီလောက်ထိတွေ့သူ ဘုန်းကြီးတောင် ဘပြောင်ကြီးလောက် သာသနာစောင့်ရှောက်မည့်သူ မရှိထင်နေသေးရင် ကျန်နေရာရ ဘုန်းကြီးများ သာဆိုးမည်။ သူတို့ဖက်ကတွေးပြန်တော့ ဟုတ်တာပဲ.. အသက်ကြီးပြီလေ.. ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲသာလျင် သူတို့ လိုက်မှီမည် ထိန်းနိုင်မည်.. အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားရင် မသေချာတော့။ အုပ်ချုပ်စီမံ ကဏ္ဍမှာ change management ဘာသာရပ် သီးခြားရှိတာပဲ။ ပိုတိုးတက်လာနိင်ခြင်းနဲ့အတူ စွန့်စားရမှာ မလိုချင်တော့… အရွယ်အားဖြင့်လည်း မဆိုင်တော့ပြီ.. မသေချာတဲ့ အလုပ်မလုပ်လိုတော့..နောက်ပီးဒေါ့ ရုပ်ဝတ္တုတိုးတက်လေ သာသနာ ဆုတ်ယုတ်လေ (သာသနာထက် သူတို့ရပ်တည်မှု ထိပါးတ ပိုကြောက်မှာပေါ့။ နို့မိုလျင် တီဗွီလှူ ၊ကားလှူ ၊ အိုင်ဖုံးအလှူ ခံပါ့မလား) ပြောကြေးဆို ဘွားဒေါ်ဂျီးလည်း ဒီသဘောပဲ။ တိုက်ခိုက်နေရတာထက် အလံဖြူ ထောင် နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ လမ်းစဉ်ရွေးလိုက်တယ်။ အသက်အရွယ် သိပ်စကားပြောတယ်။ သီတဂူ ဆရာတော် ခြေလှမ်းကို ဒီမိုတို့ မျက်ခြေမပြတ်ကြနဲ့..။ လိုအပ်လျင် ရန်ငါစည်းပြတ်ကြ..။ နို့မို့လျင် ၂၀၁၅ ရွေးဂေါက်ပွဲမှာ ဒီမိုသမားအတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်လိမ့်မည်။
Tragedy abruptly puts an end to UNLV senior’s life
မောင်ရာပြည့်ကို.. ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့တင် လပ်စ်ဗေးဂတ်ရောက်တုံး… စကားတွေပြောလိုက်ရသေးတယ်..။
ဘယ်ကောင်မလေးတွေ လိုက်ရိုက်နေလဲမှ မသိတာ။
သဂျီးရေ… အရောင်ရင့်မှတ်တမ်းမှာ သမိုင်းကျန်ရစ်အောင်…
Charlie Hebdo now printing7million copies – Jan. 17, 2015
Myanmar Gazette February 2015 No74 by Myanmar Gazette
သူကြီး မင်း ရဲ့ သတင်းစာ အပြင်အဆင် ဒီဇိုင်း တွေ ဒီ တစ်ပါတ် ပိုပြီးအဆင့်မြင့် လာတယ် ထင်ရဲ့။
Well Done ပါ။ :))
မကျဆုံးမီ ခြောက်ရက်အလို ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့သည့် နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းမှ
ရန်ပိုင်| January 20, 2015 |
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီ(ဗကပ) ၏ အတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်ကြင်မောင် (ခ) ရဲဘော်ထွန်း အသက် ၉၂ နှစ်သည် လူကြီးရောဂါဖြင့် တရုတ်- မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။
အပေါ်က သတင်းဆောင်းပါးကို ..အောက်ကဆောင်းပါးနှင့်တွဲဖတ်စေလိုသည်။
ဒါလေးနဲ့လဲ တွဲဖတ်ကြည့်ပါ။ lol:-)))))
UN condemns Myanmar monk Wirathu’s ‘sexist’ comments
The BBC’s Jonah Fisher in Yangon said monks areapowerful political lobby in Myanmar.
ဒီမယ် သူကြီးမင်း ရေ့ တွေ့ပြီဟုတ်။ ဘယ်သူ က ဘယ်သူ့ အတွက် လုပ်ပေးနေရတယ် ဆိုတာ။
“ကျွန်မ ရဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ – မရှိ။”
ဘုန်းကြီးကိုးကွယ် တာလား ……… :hee:
နိုင်ငံခြားသား တစ်ချို့ ဒီ က ဘုန်းကြီး ကျောင်း မှာ တရားလာအားထုတ်နေတာ သူတို့ဟာသူတို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်လို့ ဆိုပြီး လာ တရား အားထုတ် နေတာ မဟုတ်ပါ။
.ကထူးဆန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့အမေးနဲ့
Post by Mingalapar.
ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ တိုင်းပြည်လို့ ညီမင်းညို ဘာ့ကြောင့် ရည်ညွှန်းသလဲ
အရင်က.. စတီဗင်ဟောကင်းပြောထားတဲ့အတိုင်း.. ဘီလ်ဂိတ်ကပြောပြန်ပြီဆိုတော့… သေချာလာပုံပါပဲ..
နိဗ္ဗာန်တွေ…။ ပါဏာတိပါတတွေ.. ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ.. သိချင်..။
လောကကြီး ထဲ မြင်နေရတဲ့ “ကံ ကံ၏ အကျိုး အကြောင်း” တွေ ကို AI က တကယ်ဘဲ ဖမ်းဆုပ် ပြနိုင်မှာတဲ့လား။
အခု သတင်း ကို အသေအချာ သိမ်းထား။ သူမှန်းတာ လွဲ ရင် ပြန်ပြောကြရအောင်။
(Year 2100) လောက်ထိ နေနိုင်ခဲ့ ကြရင်ပေါ့)
ဒီမှာ သူ မပြောခဲ့ ပါလို့ ငြင်းခဲ့တဲ့ သူမှန်းပြော ခဲ့ တဲ့ စကား။
လောလောဆယ် မတော့ ပြောချင်တာ ကို ရွာထဲ တန်းချ ရေးပြနိုင် တဲ့ အစွမ်း ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ် တစ်ခု ထွင်နိုင်ကြရင် ကောင်းမယ် တွေးနေတာ ကော။ :))
အမေရိကားကို.. အမေရိကန်လို့ပြောပြောနေတတ်တဲ့.. အမ်အာတီဗီရဲ့ဘာသာပြန်တွေလုပ်ချလိုက်ပုံများကတော့… ဂျွန်ကယ်ရီကဒဏ်ငွေဆောင်လိုက်ရတာကို.. သူကပဲဒဏ်ငွေပေးစေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပုံဖြစ်သွားပါကြောင်း..
အဲ သတင်း က အမေရိကန် စကား နဲ့ မှ ရေးမထားတာကို လေ။
မှားပြန်မိမှာပေါ့။ lol:-)))) jk